﻿ ​५१ हजारको पुरस्कार पाउने हो ? पुस्तक पठाउनुहोस्
​५१ हजारको पुरस्कार पाउने हो ? पुस्तक पठाउनुहोस्
धरान । धरानस्थित कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयले देशभरीबाट एउटा पुस्तकलाई नगद ५१ हजार रुपैयासहित विमल स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । वार्षिक रुपमा यस्तो पुरस्कार दिने भएको हो ।
पुस्तकालयको शनिबारको कार्य समिति बैठकले यो निर्णय गरेको हो । पुरस्कारको नाम विमल स्मृति पुरस्कार हुनेछ । यो निर्णयसँगै शनिबार नै पुस्तकालयले प्रकाशक, लेखक तथा साहित्यकारहरुलाई आगामी चैत अन्तिम सातासम्म प्रकाशन हुने पुस्ककको ३ प्रति पुस्तकालयमा पठाउन आह्वान गरेको छ ।
पुस्तकालयका सचिव चेवन राईका अनुसार बर्षभरि प्रकाशन भएको पुस्तकहरुमध्ये एउटा उत्कृष्ट छनौट भएको पुस्तकलाई यो पुरस्कार दिने निर्णय भएको हो । यसले लेखक साहित्यकारहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने साथै श्रष्टाहरुप्रति आफ्नो लगाव र पुस्तकालयको गतिविधि बढाउने आशा गरिएको छ । उनले भने, ‘गएको बैशाखदेखि आगामी चैत अन्तिमसम्म प्रकाशन भएको पुस्तकको ३ प्रति पठाउन लेखक, साहित्यकारहरुलाई आग्रह गछौं ।’
पुस्तकालयमा प्राप्त पुस्तकहरुलाई एक छनौट समिति बनाएर उत्कृष्ट छनौट गर्ने र त्यसलाई ५१ ह्जार नगदसहित विमल स्मृति पुरस्कार दिइनेछ । यो पुस्कार प्रत्येक बर्ष बैशाख २४ गते कवि विमल गुरुङ दिवंगत भएको स्मृति दिवस पारेर प्रदान गरिनेछ । यस्तै, पुस्तकालयले आगामी बर्षदेखि बर्षमा एक जनालाई ‘पुर्ण–सरस्वती सम्मान’ पनि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो सम्मान कार्तिक १९ गते आयोजना हुने राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताको दिन दिइनेछ । हरेक बर्ष २ जनालाई सम्मान गरिदै आएकोमा आगामी बर्षमा एक जनालाई मात्र बिशेष प्रकारको सम्मान पत्र तयार गरेर सम्मान दिइन लागेको हो । यसैगरि, पुस्तकालयको थप आयस्रोत बढाउन पुस्तकालयका सदस्यहरु बनाउने र यसबापत प्रत्येक सदस्यबाट प्रवेश शुल्क २ सय तथा मासिक शुल्क १ सय मात्र लिने निणय भएको पनि पुस्तकालयले जनाएको छ ।
धरान १८, बुद्धचोकस्थित पुस्तकालयले हरेक बर्ष कवि विमलको जन्मदिन पारेर कार्तिक १९ गते राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यो पुस्तकालय असामयिक निधन भएका आफ्ना कवि छोरा विमल गुरुङको स्मृतिमा बुबा पुर्णबहादुर र आमा सरस्वतीले स्थापना गरेका हुन् । पुस्तकालय सञ्चालनको लागि ५० लाखको अक्षय कोष समेत बनाइदिएका छन् ।